Iraan - BBC News Afaan Oromoo
Lammiin Iraaqi du'a godaantoota 350 Awustiraaliyaatti imalaa turaniitiif himatame
Poolisiin biyyattii akka jedheetti namni amma himatane kunis qaama namoota mana seeraan ala namoota dadabrsuun bara 2001'tti du'aatii namoota 350 qaqabsiiseedha.
20 Onkololeessa 2019
Saahaar Taabaar: Aartistiin tun arrabsoodhaan 'to'annaa jala oolte'
Saahaar Taabaaran maxxansaalee isheen Inistaagiraam irraatti beekamitti argattus, suuraawwan ishee hedduun garuu eediit kan godhamaniidha.
7 Onkololeessa 2019
Sawudii: 'sababa sodaachisuu Iraaniif' gatiin boba'aa dabalu danda'a'
Mootiin Sawudii Mohaammad bin Salmaan sababa sodaachisuu Iraaniif' jecha gatiin boba'aa "hanga hin yaadamiin ol" akka dabaluuu danda'u addunyaa akeekkachiisan.
30 Fuulbaana 2019
Iraan haleelamuu buufata boba'aa Sa'uudii booda himannaa irratti dhiyaate haalte
Gaggeessitootni Firaansi, Jarmanii fi UK himannaa Ameerikaan gidduugala oomisha boba'aa Iraantu rukute jette deeggaran.
24 Fuulbaana 2019
Biyyoonni alaa Galoo Galaanaa keessaa akka ba'an Iraan akeekkachiiste
Wayita Ameerikaan loltoota gara Sa'uudii Arabiyaatti bobbaasuu eegaltetti Pirezidaantiin Iraan Hasan Rohaanii biyyoonni dhihaa naannawa Galoo Galaanaa (Gulf) keessaa nuuf ba'aa jechuun akeekkachiisan.
23 Fuulbaana 2019
Lammii Iraan 'shiftoota' galanaarraa Somaaleetiin waggaa afuriif uggurame ture gadhiifame
Namni lammummaan isaa Iraan ta'eefi imala galaanarraan beekamaa ta'e erga waggoota afuriif 'shoftoota' galaanarraa Somaaleetiin ugguramee ture bilisa ba'e jedhan.
22 Fuulbaana 2019
Haleellaa boba'aa Saawudii: US loltootashee gara Saawudii Arabiyaatti erguuf
Kaayyoon loltoota bobbaasuu, 'ittisaa' jedhu kunis erga dhaabbileen kuusaa boba'aa Sawudii Iraaniin akka haleelame himameen boodadha. Iraan ammoo biyya daangaa isheerratti dhukaasa banu kammiyyuu balleessuuf qophii ta'ushee dhaadattee jirti.
Haleellaa Boba'aa Sa'uudii: 'Meeshaan haleellaa qaqqabsiise Iraan irraa akka dhufe mirkaneessa'
Hafteen caccabaa misaa'elaa fi diroonii buufataalee boba'aa Sa'uudii Arabiyaa haleelanii, meeshaaleen kunneen Iraan irraa akka dhukaafaman kan mirkaneessaniidha jette Sa'uudiin.
19 Fuulbaana 2019
Shamarreen Iraan dirree kubbaa miilaa seente jedhamuun himatamte abidda ofitti qabsiisuun lubbuun ishee darbe
Deeggartuun kubbaa miilee Iraan torbee dura abidda ofitti qabsiifte lubbuun ishee darbe.
10 Fuulbaana 2019
Lammiileen Iraan biyyattiin Ispoortii addunyaarraa akka dhorkamtu gaafatan
Laammileen Iraan hedduun Miidiyaa hawaasummaa fayyadamuun biyyi isaani walgorgommii Ispoortii adduunya irraa akka dhorkamtu gaafachaa jiru.
Namoonni beekamoon Iraan karaan akka itti hin cufamnef ambulaansi yaabbatu
Namoonni beekamoon Iraan karaan akka itti hin cufamneef Ambulaansi fayyadamu
Dooniin boba'aa Iiraan osoo Jibiraaltar qaxxamuruuf jettuu qabamte gadhiifamte
Dooniin Iraan erga ji'a Waxabajjii boba'aa gara Sooriyaatti geessaa jirti jedhamuun shakkamtee qabamuun Jibilaartaritti hidhamtee turte gadhiifamte.
19 Hagayya 2019
Fincila Yaman: Gareen finciltootaa Yaman magaalaa Aden to'atan
Gareen finciltoota Yaman kibbaa fottoqsuuf qabsaa'an teessoo mootummaa Yaman kan beekamtii mootummoota idila adunyaa qabuu to'achuu beeksisan.
11 Hagayya 2019
US Ministira haajaa alaa Iraan Javaad Zaraiif irra qoqoobbii keesse
Ministirri haajaa alaa Iraan Mohaammad Javaad Zariif qoqqobbiin US isaan irra keesse karaa kamiinuu isaanis ta'e maatii isaanii akka hin miine dubbatan.
1 Hagayya 2019
Naajeeriyaatti rasaasni akka tasa dhuka'e gaazixeessaa galaafatte
Magaalaa guddoo Naajeeriyaa Abujaatti gaazixeessaa walitti bu'insa miseensota garee deggertoota warra Shi'aa Iraaniifi humnoota nageenyaa gidduutti uumamee ture dirreerraa gabaasaa jiru rasaasni tasaa galaafatte.
23 Adooleessa 2019
Biriteen doonii ishee Iraan to'atte jennaan yaaddofte
Taankarii duraan eegdota ulaa Hormuz jiraniin to'atamee ture amma gadi dhiifameera.
20 Adooleessa 2019
Qoqqobbiin Ameerikaa haaraan gaggeessaa olaanaa Iraan Hamenii irratti qiyyafate
Qoqqobbiin haaraan Ameerikaan gaggeessaa olaanaa Iraan Hameenii irratti qiyyafate dhiibbaa cimaa irraan gaha jedhame.
25 Waxabajjii 2019
US meeshaalee waraanaa Iraan sirna koompiitaraa isaanii hatuun haleelte
Sirnoonni Koompiiwtaraa hataman rookkeetiifi miisaayeloota biyyattii ajajuuf kanneen itti dhimma bahaman turan.
23 Waxabajjii 2019
Tiraamp wal waraansa eegallaan Iraan lafarraa baddii jechuun akeekkachiisan
Pirezidantiin AMeerikaa Donaald Tiraamp nuti waraana hinbarbaannuu garuu wal warransi eegalamnaan Iraan lafarraa baddii jechuun akeekachiisaniiru.
22 Waxabajjii 2019
Tiraamp Iraan xiyyaarittii kuffisuun 'dogoggora cimaa hojjattee' jedhan
Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp Iraan 'dogoggora' cimaa raawwatte,ta'us itti yaaddee raawwatte jedhee yaaduun natti ulfaata jedhan.
21 Waxabajjii 2019